ShweMinThar: We can't stay together....so...I miss you baby...
ရပ်ဝေမြေခြားမှာ ရောက်နေတဲ့ချစ်သူများ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ရင်ခုန်သံအေးစက်မသွားဖို့ဘယ်လိုများ လုပ်ရပါ့မလဲ။ ထောင်ချီဝေးနေတဲ့ မိုင်တွေကြောင့် အချစ်တွေ တိုက်စားခံရမှာ ကြောက်နေသူများ၊ ကွန်ပျူတာ scream နဲ့ပဲ ကျေနပ်နေရသူများ၊ အသံလေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်နေရသူများ နှစ်သိမ့်နေရသူများအတွက် အချစ်တွေလျော့ပါး မသွားစေဖို့ ဘယ်လိုများအကြံဥာဏ်ပေးရပါ့မလဲ။
ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ရှောင်ဖို့အချက်နည်းနည်းတော့ အရင်ပြောရဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ချစ်သူရယ် လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင် လှေကားပေါ်မှာထိုင်လျက်ဖြစ်စေ ၊ ထလျက်ဖြစ်စေ အကြင်နာအနမ်း မပေးမိစေနဲ့ ၊ ဓာတ်ပုံ လက်ဆောင်မယူမိစေနဲ့၊ ပ၀ါနီနီမပေးမိစေနဲ့၊ အဲဒီ့အချက်တွေတတ်နိုင်သမျှ ရှောင်စေချင်တယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ရေခြားမြေခြားကွဲနေတဲ့စုံတွဲ အတော်များများကိုလိုက်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ အဲဒီ့အချက်တွေနဲ့ သွားငြိနေ တာကိုတွေ့ရတယ်။
ဒါကြောင့် ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ မခွဲလိုတဲ့ဆန္ဒအမှန်ရှိရင်တော့ အပန်းမကြီးဘဲ လိုက်နာလိုက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။ ချစ်လျက်နဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရင်ခွင်နန်းတော်ထက် မခိုနိုင်သူတွေ ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြဦးစို့။
အနေဝေးကြတဲ့ချစ်သူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားလက်ဆုံပြောဖို့ အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးရှားပါးတတ်ကြ ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးက ရှိစေဦးတော့ နှလုံးသားက နိုးထဖို့မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ချုံကွယ်တစ်မယ်မေ့တွေဖြစ်ကုန်ကြရော။ အနေဝေးနေတဲ့ ချစ်သူတိုင်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချိန်ဖန်တီးပြီး စကားလက်ဆုံကြဖို့လိုအပ်တယ်။ ကွန်နက်ရှင်ဟာ အမြဲပြတ်တောက်နေမယ်ဆိုရင် အနာဂတ်ချစ်ခရီးလမ်းဟာ မှုန်ဝါးဝါးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဖုန်းနဲ့ပဲပြောနေတယ်ဆိုရင် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ရိုးအီသွားတတ်တယ်။
(၂) နည်းပေါင်းစုံအဆက်အသွယ် မပြတ်အောင်လုပ်
ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အွန်လိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် စာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူနဲ့ကိုယ်ကြားက သံယောဇဉ်ကြိုးကို အမြဲ ချည်နှောင်စေဖို့ နည်းပေါင်းစုံနဲ့အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ထားပါ။ လက်ဆောင်ပို့ပေးတာတို့၊ ချစ်သ၀ဏ်လွှာ ပို့ပေးတာတို့ စသဖြင့် အမြဲအဆက်အသွယ်ရှိနေပါစေ။
(၃) ဘုံ စိတ်ဝင်စားစရာဖလှယ်ပါ။
မိုင်တွေခြားနေပေမယ့် ရင်ဘတ်ခြင်းနီးချင်ကြတဲ့သူတွေအတွက် ရင်ခုန်သံတွေ အမြဲနွေးစေဖို့ သူရော ကိုယ်ရော စိတ်ဝင် စားတဲ့အကြောင်း အရာတစ်ခုကိုရွေးပြီး အတူတကွဆွေးနွေးကြည့်ပါ။ ဥပမာ – လီဗြောင်ဟွန်းရဲ့ ဟောလိဝုဒ်ကား G.I Joe: The Rise of Cobra မှာ လီဗြောင်ဟွန်းရဲ့ဗီလိန်သရုပ်ဆောင်ပုံကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူးဆိုတာ သူရောကိုယ်ရော သီးခြားစီကြည့်ပြီးဆွေးနွေး ကြပေါ့။ သီချင်းဆိုရင်လည်း ဘယ်အဆိုတော်ကဖြင့်ကောင်းတယ်၊ ဘယ်သီချင်းကဖြင့် ဆုရသွားတာ နားထောင်ကြည့်။ ပြီးရင်ဆွေးနွေးကြည့်ကြ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ အဆက်မပြတ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
(၄) တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုရှိပါ။
အနေဝေးနေတဲ့ချစ်သူများအနေနဲ့ မှားလေ့မှားထရှိတဲ့ အမှားတစ်ခုကတော့ အနေဝေးလို့ကြားလေများသွေးမှာစိုးပြီး တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက် ထိန်းချုပ်ချင်ကြတယ်။ အဲလိုလုပ်ရင်း တစ်ဖက်ဖက်ကနေပြီး ကြင်ယာဖက် အစစ်အမှန် မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မြင်လာရင် နောက်ထပ်သင့်တော်တဲ့ လူတစ်ယောက်လက်ထဲ ပါသွားလိမ့်မယ်။ အနေဝေးနေတဲ့ ချစ်သူတိုင်းတစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုအပြည့်အ၀ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ ဟိုလူနဲ့စွပ်စွဲတာမျိုး၊ သံသယစိတ်ဝင်တာမျိုး၊ ထိန်းချုပ်ချင်တာမျိုးတို့ မလုပ်ရဘူး။
ကိုယ်တို့ချစ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂတ်ချစ်လမ်းခရီးအတွက် ဘယ်လိုဘယ်ပုံပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးပါ။ အတူနေဖို့ဘယ်နေရာကတော့ဖြင့်ကောင်းတယ်၊ သားလေးမွေးမယ်၊ သမီးလေးမွေးမယ် စသဖြင့် အနာဂတ်အတွက် ဆွေးနွေးကြပါ။ ဒီနည်းဟာ အနေဝေးနေတဲ့ ချစ်သူတွေအတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ရင်ခုန်သံကိုအမြဲ လတ်ဆတ် စေတယ်။
(၆) ဖုန်း၊ အင်တာနက်
ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်စေ၊ အင်တာနက်နဲ့ပဲဖြစ်စေ အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ပေးရမယ်။ အဆိုတော် မာရီယာကရေးတို့များဆိုရင် သူ့ချစ်ကိုကို ရက်ပ်ပါ နစ်ခ်ကန်နွမ်နဲ့ နိုင်ငံလှည့်ရှိုးပွဲတွေဆိုနေလို့ ဝေးနေကြတဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းနဲ့ချစ်ရည်လူးကြပြီး အချစ်တွေကို မီးပူတိုက်တယ်လို့ ၀န်ခံထားတယ်။
အနေဝေးနေတဲ့ချစ်သူတွေ စကားလက်ဆုံကြတော့မယ်ဆိုပါစို့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘာတွေများပြောကြမလဲ။ 'အောင်မလေးဟဲ့....ကိုကိုလေ မင်းကိုလွမ်းလိုက်တာ ပြောမနေပါနဲ့တော့'ဆိုတဲ့စကားတွေချည်းပဲပြောနေရင် ဟိုဘက် ကလည်း 'ပြောမနေပါနဲ့တော့ ဒီကလည်း တောက်တောက်ကျအောင် လွမ်းရတာပါတော်ရေ'ဆိုပြီးပြောမနေ ပါနဲ့တော့ အဆင့်ထိရောက်သွားလိမ့်မယ်။ လွမ်းတဲ့အကြောင်းပဲ ပြောနေလို့ကိစ္စက မပြီးသေးဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ် ယောက် ဒီနေ့အဖို့ဘာတွေလုပ်ထားလဲ။ ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့တယ် ဘာအလုပ်တွေကိုတော့ဖြင့်လုပ်တယ်။ ထူးထူးခြားခြား ဘာတွေဖြစ်တယ် စတဲ့အကြောင်းတွေပြော။ သူဝါသနာပါတဲ့အကြောင်း၊ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အကြောင်းတွေပြောပေးပါ။
မိုင်တွေဝေးနေပေမယ့် ရင်ဘတ်ခြင်းနီးနေတဲ့သူတွေ ရင်ခုန်သံတွေ မအေးစက်နေရအောင် တတ်နိုင်သမျှ ရှာကြံကာ လမ်းညွှန်လိုက်ရပါတယ်။ ရင်ခုန်သံတူညီသူတိုင်း ရင်ဘတ်ခြင်း အမြန်နီးနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ပြုလျက်...။
Ref: 8 Days A week Journal Vol. 1 No. (36)